Askarta Israa’iil waxay toogasho ku dileen ilmo yar oo Falastiini ah! - Axadle
Askarta Israa’iil ayaa toogasho ku dilay wiil dhalinyaro Falastiini ah meel u dhow magaalada Yuhuudda ee Ariel ee Daanta Galbeed ee la haysto.
Sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen militariga Israel Talaadadii, Atallah Rayyan, oo 17 jir ah, wuxuu isku dayay inuu fuliyo weerar toorey ah oo ka dhan ah askarta Israel ee la geeyay isgoyska deegaanka Ariel.
“Askarta ku jirta xerada militariga” waxay arkeen weeraryahan isku dayaya inuu tooriyeeyo ama dilo laba askari (Israel), ayaa lagu yiri bayaanka.
Mid ka mid ah askarta ayaa joojiyay dhowr ka mid ah kooxdii soo weerartay mindiyo, abaanduulaha ciidanka oo goobta ku sugnaa ayaa rasaas ku furay ninka weerarka soo qaaday.
Bayaanka ayaa intaa ku daray in ciidamada Israa’iil uusan soo gaarin wax khasaaro ah. Fiidiyow ay sii daayeen ciidanka ayaa muujinaya haweeney askari ah oo lagu magacaabo “Cpl L” oo sheeganeysa in ay raacayso qofka weerarka soo qaaday “oo middi gacanta ku heysa”.
Wasaaradda Caafimaadka ee Falastiin ayaa xaqiijisay in “muwaadinku” toogashada “ay ciidamada Yuhuuda la galeen Falastiin”
Kooxaha u dooda xuquuqda Falastiin iyo Israa’iil ayaa ku eedeeyey Israa’iil in ay awood xad dhaaf ah u adeegsatay weerarada “lone yeolf” ee Falastiin, iyo in ay dileen qaar ka mid ah tuhmanayaashii ay ku soo qabteen weerarka.
Tuchel wuxuu sameeyaa saxiixa koowaad, Di